Celebrities Archives - Page 68 of 69 - ShwengweGames
နှဈဖကျပရိတျသတျတှေ စိတျဝငျစားလာတဲ့ G-Fatt နဲ့ နနျးဆု တို့ရဲ့ ပဋိပက်ခ
April 14, 2020 by Shwengwe Games
ပရိသတျကွီးရေ .. Idol couple အဖွဈပရိသတျတှေ အားကခြဈြခငျခဲ့ရတဲ့ G-fatt နဲ့နနျးဆုတို့ရဲ့ အခဈြရေးဟာ မကွာသေးမီကာလတှကေ အဆုံးသတျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှအေားလုံးက သဘောတူပွီး ပွနျတှဲစခေငျြနကွေပမေယျ့လညျး သူတို့နှဈဦးကတော့ နှဈယောကျထဲသိတဲ့အဆငျမပွမှေုတှအေတှကျ ရှဆေ့ကျဖို့မဖွဈနိုငျတော့လို့ အေးခမျြးစှာ လမျးခှဲခဲ့တာပါလို့ အငျတာဗြူးတှမှော ဖွဆေိုခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့လညျး ခုခြိနျထိ သူတို့နှဈယောကျကို စုံတှဲတှအေဖွဈ ပွနျမွငျခငျြနသေေးတဲ့ ပရိသတျတှေ အမြားအပွားပါပဲ ။
လတျတလောမှာတော့ အရမျးကိုခဈြခဲ့ကွပွီး လူတိုငျးအားကရြတဲ့ စုံတှဲလေးဖွဈခဲ့တဲ့ Gfatt နဲ့ နနျးဆုတို့နှဈယောကျ ကတော့ ပဋိပက်ခလေးတှေ အနညျးငယျဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ ။ နနျးဆုတဈယောကျ မကွာသေးမီက သူမရရှိခဲ့တဲ့ ရညျးစားစာလေးတှကေို အမှတျတရအဖွဈသူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျမှာ ပရိသတျတှကေို မြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ ။ ဒီရညျးစားစာ ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး G-fatt က နနျးဆုကိုပွောတယျလို့ထငျရလောကျတဲ့ စာအခြို့ကို သူ့ရဲ့ မိုငျဒေးမှာရေးသားခဲ့ပွီး နနျးဆုကလညျး ပွနျလညျတုံ့ပွနျရေးသားခဲ့ပါတယျ ။ မိုငျဒေးမှာ အခငျြးခငျြး အပွနျအလှနျတငျရငျးကနေ ပရိသတျတှသေိရှိသှားပွီး သူတို့နှဈဦးရဲ့ ပဋိပက်ခကို ပရိသတျတှေ စိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နခေဲ့ကွပါတယျ ။
တခြို့ပရိသတျတှကေတော့ အရမျးကိုအားကစြရာကောငျးခဲ့တဲ့ စုံတှဲလေး အခုလို ပွဿနာတှေ ဖွဈနရေတာကို စိတျမကောငျးဖွဈနကွေပွီး တခြို့ပရိသတျတှကေတော့ G-fatt ဘကျက မခံနိုငျလို့ ပွနျလညျတုံ့ပွနျစာတှရေေးသားခဲ့ကွပမေယျ့ G-fatt ကတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေို ဘာစာမှ ထပျမံမရေးသားဖို့ ပွနျလညျတောငျးဆိုခဲ့ပွီးအခုထှကျမယျ့ သီခငျြးသဈလေးအတှကျပဲ အာရုံစိုကျပေးဖို့ မတ်ေတာရပျခံခဲ့ပါတယျ ။
Credit Emily (Cele Gabar )
နှစ်ဖက်ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ G-Fatt နဲ့ နန်းဆု တို့ရဲ့ ပဋိပက္ခ
Cele Gabar ပရိသတ်ကြီးရေ .. Idol couple အဖြစ်ပရိသတ်တွေ အားကျချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ G-fatt နဲ့နန်းဆုတို့ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ မကြာသေးမီကာလတွေက အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေအားလုံးက သဘောတူပြီး ပြန်တွဲစေချင်နေကြပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ဦးကတော့ နှစ်ယောက်ထဲသိတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအတွက် ရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့ အေးချမ်းစွာ လမ်းခွဲခဲ့တာပါလို့ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခုချိန်ထိ သူတို့နှစ်ယောက်ကို စုံတွဲတွေအဖြစ် ပြန်မြင်ချင်နေသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ အများအပြားပါပဲ ။
လတ်တလောမှာတော့ အရမ်းကိုချစ်ခဲ့ကြပြီး လူတိုင်းအားကျရတဲ့ စုံတွဲလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Gfatt နဲ့ နန်းဆုတို့နှစ်ယောက် ကတော့ ပဋိပက္ခလေးတွေ အနည်းငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ။ နန်းဆုတစ်ယောက် မကြာသေးမီက သူမရရှိခဲ့တဲ့ ရည်းစားစာလေးတွေကို အမှတ်တရအဖြစ်သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ ပရိသတ်တွေကို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီရည်းစားစာ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး G-fatt က နန်းဆုကိုပြောတယ်လို့ထင်ရလောက်တဲ့ စာအချို့ကို သူ့ရဲ့ မိုင်ဒေးမှာရေးသားခဲ့ပြီး နန်းဆုကလည်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။ မိုင်ဒေးမှာ အချင်းချင်း အပြန်အလှန်တင်ရင်းကနေ ပရိသတ်တွေသိရှိသွားပြီး သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပဋိပက္ခကို ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ် ။
တချို့ပရိသတ်တွေကတော့ အရမ်းကိုအားကျစရာကောင်းခဲ့တဲ့ စုံတွဲလေး အခုလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်နေရတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီး တချို့ပရိသတ်တွေကတော့ G-fatt ဘက်က မခံနိုင်လို့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်စာတွေရေးသားခဲ့ကြပေမယ့် G-fatt ကတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဘာစာမှ ထပ်မံမရေးသားဖို့ ပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအခုထွက်မယ့် သီချင်းသစ်လေးအတွက်ပဲ အာရုံစိုက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ် ။
နှဈဖကျပရိသတျတှပေါ ဝငျပါလာတဲ့ G-Fatt နဲ့ နနျးဆုတို့ရဲ ပဋိပက်ခ ဇာတျလမျး
Cele Gabar ပရိသတျကွီးရေ Idol couple အဖွဈပရိသတျတှေ အားကခြဈြခငျခဲ့ရတဲ့ G-fatt နဲ့နနျးဆုတို့ရဲ့ အခဈြရေးဟာ မကွာသေးမီကာလတှကေ အဆုံးသတျသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှအေားလုံးက သဘောတူပွီး ပွနျတှဲစခေငျြနကွေပမေယျ့လညျး သူတို့နှဈဦးကတော့နှဈယောကျထဲသိတဲ့အဆငျမပွမှေုတှအေတှကျရှဆေ့ကျဖို့မဖွဈနိုငျတော့လို့ အေးခမျြးစှာလမျးခှဲခဲ့တာပါလို့ အငျတာဗြူးတှမှောဖွဆေိုခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့လညျးခုခြိနျထိသူတို့နှဈယောကျကိုစုံတှဲတှအေဖွဈပွနျမွငျခငျြနသေေးတဲ့ ပရိသတျတှအေမြားအပွားပါပဲ
လတျတလောမှာတော့အရမျးကိုခဈြခဲ့ကွပွီးလူတိုငျးအားကရြတဲ့ စုံတှဲလေးဖွဈခဲ့တဲ့ Gfatt နဲ့ နနျးဆုတို့နှဈယောကျ က တော့ပဋိပက်ခလေးတှအေနညျးငယျဖွဈပှားခဲ့ပါတယျ။နနျးဆုတဈယောကျ မကွာသေးမီကသူမရရှိခဲ့တဲ့ရညျးစားစာလေးတှကေိုအမှတျတရအဖွဈသူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျမှာ ပရိ သတျတှကေိုမြှဝပေေးခဲ့ပါတယျ ။ ဒီရညျးစားစာ ကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး G-fatt ကနနျးဆုကိုပွောတယျလို့ထငျရလောကျတဲ့စာအခြို့ကိုသူ့ရဲ့မိုငျဒေးမှာရေးသားခဲ့ပွီးနနျးဆုကလညျးပွနျလညျတုံ့ပွနျရေးသားခဲ့ပါတယျ ။မိုငျဒေးမှာ အ ခငျြး ခငျြးအပွနျအလှနျတငျရငျးကနေ ပရိ သတျတှသေိရှိသှားပွီးသူတို့နှဈဦးရဲ့ ပဋိပက်ခကိုပရိသတျတှစေိတျဝငျတစားစောငျ့ကွညျ့နခေဲ့ကွပါတယျ။
တခြို့ပရိသတျတှကေတော့အရမျးကိုအားကစြရာကောငျးခဲ့တဲ့ စုံတှဲလေး အခုလိုပွဿနာတှေ ဖွဈနရေတာကို စိတျမကောငျးဖွဈနကွေပွီး တခြို့ပရိသတျတှကေတော့ G-fatt ဘကျက မခံနိုငျလို့ ပွနျလညျတုံ့ပွနျစာတှရေေးသားခဲ့ကွပမေယျ့ G-fatt ကတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှကေိုဘာစာမှ ထပျမံမရေးသားဖို့ ပွနျလညျတောငျးဆိုခဲ့ပွီးအခုထှကျမယျ့ သီခငျြးသဈလေးအတှကျပဲ အာရုံစိုကျပေးဖို့ မတ်ေတာရပျခံခဲ့ပါတယျ ။
နှစ်ဖက်ပရိသတ်တွေပါ ဝင်ပါလာတဲ့ G-Fatt နဲ့ နန်းဆုတို့ရဲ ပဋိပက္ခ ဇာတ်လမ်း
Cele Gabar ပရိသတ်ကြီးရေ Idol couple အဖြစ်ပရိသတ်တွေ အားကျချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့ G-fatt နဲ့နန်းဆုတို့ရဲ့ အချစ်ရေးဟာ မကြာသေးမီကာလတွေက အဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေအားလုံးက သဘောတူပြီး ပြန်တွဲစေချင်နေကြပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ဦးကတော့နှစ်ယောက်ထဲသိတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့လို့ အေးချမ်းစွာလမ်းခွဲခဲ့တာပါလို့ အင်တာဗျူးတွေမှာဖြေဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်လည်းခုချိန်ထိသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစုံတွဲတွေအဖြစ်ပြန်မြင်ချင်နေသေးတဲ့ ပရိသတ်တွေအများအပြားပါပဲ
လတ်တလောမှာတော့အရမ်းကိုချစ်ခဲ့ကြပြီးလူတိုင်းအားကျရတဲ့ စုံတွဲလေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Gfatt နဲ့ နန်းဆုတို့နှစ်ယောက် က တော့ပဋိပက္ခလေးတွေအနည်းငယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နန်းဆုတစ်ယောက် မကြာသေးမီကသူမရရှိခဲ့တဲ့ရည်းစားစာလေးတွေကိုအမှတ်တရအဖြစ်သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်မှာ ပရိ သတ်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒီရည်းစားစာ ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး G-fatt ကနန်းဆုကိုပြောတယ်လို့ထင်ရလောက်တဲ့စာအချို့ကိုသူ့ရဲ့မိုင်ဒေးမှာရေးသားခဲ့ပြီးနန်းဆုကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။မိုင်ဒေးမှာ အ ချင်း ချင်းအပြန်အလှန်တင်ရင်းကနေ ပရိ သတ်တွေသိရှိသွားပြီးသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ ပဋိပက္ခကိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြပါတယ်။
တချို့ပရိသတ်တွေကတော့အရမ်းကိုအားကျစရာကောင်းခဲ့တဲ့ စုံတွဲလေး အခုလိုပြဿနာတွေ ဖြစ်နေရတာကို စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြပြီး တချို့ပရိသတ်တွေကတော့ G-fatt ဘက်က မခံနိုင်လို့ ပြန်လည်တုံ့ပြန်စာတွေရေးသားခဲ့ကြပေမယ့် G-fatt ကတော့ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကိုဘာစာမှ ထပ်မံမရေးသားဖို့ ပြန်လည်တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအခုထွက်မယ့် သီချင်းသစ်လေးအတွက်ပဲ အာရုံစိုက်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါတယ် ။
Quarantine ဝငျဖို့သှားနပွေီဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေို မြှဝခေဲ့တဲ့ အဆိုတျောနီတာ
လတျတလောကမ်ဘာတဈဝှမျးလုံးမှာဖွဈပှားနတေဲ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈပိုးကတော့ မွနျမာနိုငျငံကို နောကျကမြှရောကျရှိလာပမေယျ့ သုံးပတျအတှငျးမှာ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူ(၆၂) ယောကျအထိ ရှိလာပွီဖွဈပါတယျ။ (၁၄.၄.၂၀၂၀) (၀၀.၁၅)နာရီအထိ စဈတမျးမြားအရ ရောဂါတှရှေိ့သူ(၆၂) ယောကျထဲက (၄) ဦးသဆေုံးခဲ့ပွီဖွဈပါတယျ။ မနကေ့သတငျးထုတျပွနျခကျြမှာတော့ မထငျမှတျထားလောကျအောငျ နိုငျငံကြျောအဆိုတျောမြိုးကွီးတို့ မိသားစုလညျး ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီနမှေ့ာလညျး အဆိုတျောနီတာက Quarantine ဝငျဖို့သှားနပွေီဖွဈ ကွောငျးသူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။ သူကတော့ ခရဈယာနျဘာသာဝငျတဈယောကျဖွဈပွီး ဘာသာရေးပှဲတှကေိုလညျးတကျရောကျခဲ့သူပါ။ လှနျခဲ့တဲ့တဈပတျကြျောလောကျက တညျးက စတငျဖြားခဲ့တာမို့ နီတာက တော့ ဒီနမှေ့ာ Quarantine ဝငျဖို့သှား ရောကျခဲ့တဲ့အကွောငျး မြှဝခေဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။အနုပညာရှငျမောငျနှမတှကေတော့ နီတာရဲ့ ပို့ဈအောကျမှာ မွနျမွနျကနျြးမာလာစဖေို့နဲ့ Covid-19 Negative Result ထှကျဖို့ကိုလညျး ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါသေးတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ တဈစထကျတဈစတိုးမြားလာတဲ့ ရောဂါပိုးတှရှေိ့လူနာတှထေဲမှာသာမနျအရပျသားတှသောမကဘဲ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး၊နာမညျကွီးအနု ပညာရှငျတှအေထိ တှရှေိ့လာရပွီဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာလညျး အဆိုတျောနီတာက သံသယလူနာအဖွဈနဲ့ Quarantine ဝငျဖို့သှားခဲ့ကွောငျး မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ အဆိုတျောနီတာတဈယောကျ Negative Result ထှကျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Credit Rainbow- Cele Gabar
Quarantine ဝင်ဖို့သွားနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေကို မျှဝေခဲ့တဲ့ အဆိုတော်နီတာ
လတ်တလောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်ကျမှရောက်ရှိလာပေမယ့် သုံးပတ်အတွင်းမှာ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ(၆၂) ယောက်အထိ ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ (၁၄.၄.၂၀၂၀) (၀၀.၁၅)နာရီအထိ စစ်တမ်းများအရ ရောဂါတွေ့ရှိသူ(၆၂) ယောက်ထဲက (၄) ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်မျိုးကြီးတို့ မိသားစုလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနေ့မှာလည်း အဆိုတော်နီတာက Quarantine ဝင်ဖို့သွားနေပြီဖြစ် ကြောင်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးပွဲတွေကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့သူပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်လောက်က တည်းက စတင်ဖျားခဲ့တာမို့ နီတာက တော့ ဒီနေ့မှာ Quarantine ဝင်ဖို့သွား ရောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း မျှဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေကတော့ နီတာရဲ့ ပို့စ်အောက်မှာ မြန်မြန်ကျန်းမာလာစေဖို့နဲ့ Covid-19 Negative Result ထွက်ဖို့ကိုလည်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ တစ်စထက်တစ်စတိုးများလာတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိလူနာတွေထဲမှာသာမန်အရပ်သားတွေသာမကဘဲ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊နာမည်ကြီးအနု ပညာရှင်တွေအထိ တွေ့ရှိလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း အဆိုတော်နီတာက သံသယလူနာအဖြစ်နဲ့ Quarantine ဝင်ဖို့သွားခဲ့ကြောင်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အဆိုတော်နီတာတစ်ယောက် Negative Result ထွက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အပွငျမထှကျဖွဈပမေဲ့ ရိုးရာမပကျြမုနျ့လုံးရပေျေါလုံးတယျဆိုတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးမွတျသူသူ
ခဈြစရာကောငျးတဲ့ မငျးသမီးခြောလေး မွတျသူသူကတော့ ပရိသတျအခဈြတျော MRTV-4 မငျးသမီးတှထေဲကတဈယောကျပါ။ ဇာတျလမျးဇာတျရုပျကိုပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျသရုပျဆောငျသလို ပရိသတျကိုအနုပညာပိုငျးမှာ တာဝနျကအြေောငျကွိုးစားလှနျးသူလေးပါ။ သူ့ရဲ့နစေ့ဉျလှုပျရှားမှုတှကေိုတော့ ပရိသတျတကေို မကွာခဏဆိုသလို မြှဝပေေးလရှေိ့ပါတယျ။
အခုလိုသင်ျကွနျရကျအတှငျးမှာလညျး အပွငျမထှကျဖွဈပမေဲ့ အိမျမှာတော့ ရိုးရာမပကျြမုနျ့လုံးရပေျေါလုပျစားနခေဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအကွောငျးကိုလညျး သင်ျကွနျတော့မုနျ့လုံးရပေျေါရအောငျလုံးတယျ ဆိုပွီးတော့ ဖဘှေ့တျချမှာရေးသာထားတာပါ။ မုနျ့လုံးရပေျေါလုံးနခေဲ့တဲ့ ပုံရိပျတှကေိုလညျး ပရိသတျကိုပွနျလညျမြှဝထေားပါသေးတယျ။မွနျမာ့နှဈသဈကူးသင်ျကွနျရကျတှကေိုရောကျရှိနပေမေဲ့ လူတျောတျောမြားမြားကတော့ အိမျမှာပဲနကွေတာပါ။
ဒါကတော့ ကူးစကျပြံ့နှံ့လှယျလှနျးတဲ့ ကပျရောဂါဆိုးကွီးကွောငျ့ဖွဈပါတယျ။ မငျးသမီးခြောလေး မွတျသူသူကလညျး အိမျတှငျးအောငျးနတောဖွဈပွီး မုနျ့လုံးရပေျေါတော့ အိမျမှာလုပျစားနခေဲ့တာပါ။ မငျးသမီးခြောလေးကတော့ ရိုးရာမပကျြအောငျမုနျ့လုံးရပေျေါတော့ လုပျစားသေးတာပါတဲ့နျော… Credit Celegabar
Source : MyatThuThu
အပြင်မထွက်ဖြစ်ပေမဲ့ ရိုးရာမပျက်မုန့်လုံးရေပေါ်လုံးတယ်ဆိုတဲ့ မင်းသမီးချောလေးမြတ်သူသူ
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မင်းသမီးချောလေး မြတ်သူသူကတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် MRTV-4 မင်းသမီးတွေထဲကတစ်ယောက်ပါ။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ရုပ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သရုပ်ဆောင်သလို ပရိသတ်ကိုအနုပညာပိုင်းမှာ တာဝန်ကျေအောင်ကြိုးစားလွန်းသူလေးပါ။ သူ့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတော့ ပရိသတ်တေကို မကြာခဏဆိုသလို မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်။
အခုလိုသင်္ကြန်ရက်အတွင်းမှာလည်း အပြင်မထွက်ဖြစ်ပေမဲ့ အိမ်မှာတော့ ရိုးရာမပျက်မုန့်လုံးရေပေါ်လုပ်စားနေခဲ့တာပါ။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်း သင်္ကြန်တော့မုန့်လုံးရေပေါ်ရအောင်လုံးတယ် ဆိုပြီးတော့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာရေးသာထားတာပါ။ မုန့်လုံးရေပေါ်လုံးနေခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပရိသတ်ကိုပြန်လည်မျှဝေထားပါသေးတယ်။မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ရက်တွေကိုရောက်ရှိနေပေမဲ့ လူတော်တော်များများကတော့ အိမ်မှာပဲနေကြတာပါ။
ဒါကတော့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့လွယ်လွန်းတဲ့ ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသမီးချောလေး မြတ်သူသူကလည်း အိမ်တွင်းအောင်းနေတာဖြစ်ပြီး မုန့်လုံးရေပေါ်တော့ အိမ်မှာလုပ်စားနေခဲ့တာပါ။ မင်းသမီးချောလေးကတော့ ရိုးရာမပျက်အောင်မုန့်လုံးရေပေါ်တော့ လုပ်စားသေးတာပါတဲ့နော်… Credit Celegabar
COVID 19 ကူးစကျခံရတဲ့ တရားဟောဆရာကို ပွဈတငျပွောဆိုမှုတှရှေိနပွေီး သူမအနနေဲ့စိတျမကောငျးဖွဈရကွောငျး ထုတျပွောလာတဲ့ ခငျလေးနှယျ
Covid – 19 ရောဂါကူးစကျမှုတှကေ တော့ တဈနထေ့ကျတဈနေ့ မြားပွားလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။အငျးစိနျမွို့နယျက တရားဟောဆရာတဈယောကျကလညျး Covid – 19 ရောဂါကူးစကျမှုဖွဈခဲ့ပွီး ထိုတရားဟောဆရာရဲ့ဟောပွောပှဲကို တကျရောကျခဲ့သူတှကေလညျး စောငျ့ကွညျ့လူနာတှအေဖွဈ ထားရှိခံနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။တခြို့သောပွညျသူတှကေတော့ ထိုတရားဟောဆရာကို ပွဈတငျပွောဆိုမှုတှရှေိနပွေီးသရုပျဆောငျ ခငျလေးနှယျကသူမအနနေဲ့ စိတျမကောငျးဖွဈရကွောငျးကို အခုလိုပဲ ပွောလာပါတယျ။
“ဆရာဒေးဗဈလား တရားဟောပှဲ လုပျရငျအမွဲတမျးလူထောငျခြီနဲ့လုပျနကွေပါ။ဆရာ တရားဟောတဲ့ထဲမှာ လူငယျတှကေို ခှနျအားဖွဈစတေဲ့အရာတှအေမြားကွီးပါတယျ။သူ့ကွောငျ့ လိမ်မာသှားတဲ့ လူငယျတှအေမြားကွီးပဲ။ အခု live လှငျ့ပွီးတရားဟောတဲ့နရောမှာ လူ အယောကျ၂၀ လောကျပါတယျ။ ပါတဲ့သူတှအေကုနျလုံးကလဲဆရာဘယျသှားသှားအမွဲတမျးပါနတေဲ့ ဆရာ့ရဲ့မိသားစုဝငျတှလေိုပါပဲ။”
“ဘုနျးဘုနျးတှနေောကျမှာလိုကျကွတဲ့ ဘုနျးဘုနျးရဲ့ကပိယ လိုမြိုးပေါ့။ မလိုကျနဲ့ဆိုရငျတောငျဆရာ့အတှကျဆိုရငျ လိုကျမယျ့လူမြိုးတှပေါ။ ဘယျသူမှတော့ ဒီရောဂါမဖွဈခငျြဘူးလေ။ ဘယျဘုနျးကွီးမဆို ကောငျးဖို့အတှကျပဲလုပျနကွေတာပါ။ကမြကတော့ဘယျဘာသာရဲ့ ဘုနျး ကွီးကိုမှ မဆျောကားဘူး။ အရာရာအားလုံးက ဘုရားရဲ့အလိုတျောပါပဲ။” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။
ခငျလေးနှယျကတော့ ဘယျဘာသာကိုမှ ထိခိုကျပွောဆိုခွငျးမရှိပဲ ပွညျသူတှေ စိတျရှငျးရအောငျသာ ပွောပွခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့ ပရိသတျကွီးကို ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
Source: Khin Lay Nwe’s fb
COVID 19 ကူးစက်ခံရတဲ့ တရားဟောဆရာကို ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပြီး သူမအနေနဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ ခင်လေးနွယ်
Covid – 19 ရောဂါကူးစက်မှုတွေက တော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ များပြားလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်က တရားဟောဆရာတစ်ယောက်ကလည်း Covid – 19 ရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုတရားဟောဆရာရဲ့ဟောပြောပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သူတွေကလည်း စောင့်ကြည့်လူနာတွေအဖြစ် ထားရှိခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောပြည်သူတွေကတော့ ထိုတရားဟောဆရာကို ပြစ်တင်ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပြီးသရုပ်ဆောင် ခင်လေးနွယ်ကသူမအနေနဲ့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းကို အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ်။
“ဆရာဒေးဗစ်လား တရားဟောပွဲ လုပ်ရင်အမြဲတမ်းလူထောင်ချီနဲ့လုပ်နေကြပါ။ဆရာ တရားဟောတဲ့ထဲမှာ လူငယ်တွေကို ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအများကြီးပါတယ်။သူ့ကြောင့် လိမ္မာသွားတဲ့ လူငယ်တွေအများကြီးပဲ။ အခု live လွင့်ပြီးတရားဟောတဲ့နေရာမှာ လူ အယောက်၂၀ လောက်ပါတယ်။ ပါတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလဲဆရာဘယ်သွားသွားအမြဲတမ်းပါနေတဲ့ ဆရာ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလိုပါပဲ။”
“ဘုန်းဘုန်းတွေနောက်မှာလိုက်ကြတဲ့ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ကပိယ လိုမျိုးပေါ့။ မလိုက်နဲ့ဆိုရင်တောင်ဆရာ့အတွက်ဆိုရင် လိုက်မယ့်လူမျိုးတွေပါ။ ဘယ်သူမှတော့ ဒီရောဂါမဖြစ်ချင်ဘူးလေ။ ဘယ်ဘုန်းကြီးမဆို ကောင်းဖို့အတွက်ပဲလုပ်နေကြတာပါ။ကျမကတော့ဘယ်ဘာသာရဲ့ ဘုန်း ကြီးကိုမှ မဆော်ကားဘူး။ အရာရာအားလုံးက ဘုရားရဲ့အလိုတော်ပါပဲ။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။
ခင်လေးနွယ်ကတော့ ဘယ်ဘာသာကိုမှ ထိခိုက်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲ ပြည်သူတွေ စိတ်ရှင်းရအောင်သာ ပြောပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
ယခုနှဈ Birthday Show ပှဲမှရရှိခဲ့တဲ့အလှူငှမြေားထဲက ငှကေပျြ သိနျး ၃၀၀ ကို Covid အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေးကျောမတီကို လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ စိုငျးစိုငျး
ပရိသတျကွီးရေ.. စိုငျးစိုငျးကတော့ ပရိသတျတှအေားပေးမှုမြားစှာ ပိုငျဆိုငျထားတဲ့မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ဒိတျဒိတျကွဲအနုပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။စိုငျးစိုငျးကတော့ ဒီနှဈ Birthday Show ကို အိပျခနျးထဲကပဲ ကငျြးပခဲ့ရာ တဈနိုငျငံလုံးက ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
စိုငျးစိုငျးရဲ့ ဒီနှဈ Birthday Show ကို SAISAI PAY ကနေ အခမဲ့ထုတျလှငျ့ပွီး ကပျရောဂါကွောငျ့ လိုအပျနတေဲ့နရောတှကေို လှူဒါနျးဖို့ရံပုံငှေ အလှူခံမှုပွုလုပျခဲ့ရာမှ ရရှိခဲ့တဲ့အလှူငှမြေားထဲက ငှကေပျြ သိနျး ၃၀၀ ကို Covid အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေးကျောမတီကို လှူဒါနျးခဲ့အကွောငျးကို ” SAISAI Birthday Show မှေးနပှေဲ့ကို အခမဲ့ဖြျောဖွတေဲ့အတှကျ ပရိသတျမြားနဲ့ မိတျဆှမြေားမှ ဝိုငျးဝနျးလှူဒါနျးရာမှာ အခုအခြိနျထိ အလှူငှေ သိနျး ၈၀၀ ခနျ့ရရှိပွီးဖွဈပါတယျရရှိတဲ့အလှူငှမြေားထဲက ငှကေပျြ သိနျး ၃၀၀ ကို Covid အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေးကျောမတီကို လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျဒီအလှူငှတှေဟော ကပျရောဂါထိနျးခြုပျရေးအလုပျနားကာလမှာ ပုံမှနျဝငျငှမေရှိတဲ့ အခွခေံအိမျထောငျစုတှအေတှကျ ရိက်ခာဝငှေရေးထဲကို ရောကျရှိမှာဖွဈပါတယျ”ဆိုပွီးရေးသားထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ” Birthday Show ကနတေဆငျ့ရံပုံငှရှောဖှတေဲ့အစီအစဉျမှာ ကနြျောနဲ့အတူပူးပေါငျးပါဝငျခဲ့ကွတဲ့ သူငယျခငျြးမြား အနုပညာရှငျမြား အတတျပညာရှငျမြား လုပျငနျးရှငျမြား နဲ့ ပရိသတျမြားအားလုံးကိုကြေးဇူးတငျပါတယျ🙏🙏🙏Sai Sai Kham Leng”ဆိုပွီး ကြေးဇူးတငျစကားပွောထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးကလညျး စိုငျးစိုငျးရဲ့ အလှူလေးအတှကျ သာဓုချေါဆိုပေးခဲ့ပါအုံးနျော။
Source- Sai Sai Kham Leng
ယခုနှစ် Birthday Show ပွဲမှရရှိခဲ့တဲ့အလှူငွေများထဲက ငွေကျပ် သိန်း ၃၀၀ ကို Covid အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ စိုင်းစိုင်း
ပရိသတ်ကြီးရေ.. စိုင်းစိုင်းကတော့ ပရိသတ်တွေအားပေးမှုများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိုင်းစိုင်းကတော့ ဒီနှစ် Birthday Show ကို အိပ်ခန်းထဲကပဲ ကျင်းပခဲ့ရာ တစ်နိုင်ငံလုံးက ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းရဲ့ ဒီနှစ် Birthday Show ကို SAISAI PAY ကနေ အခမဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီး ကပ်ရောဂါကြောင့် လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို လှူဒါန်းဖို့ရံပုံငွေ အလှူခံမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာမှ ရရှိခဲ့တဲ့အလှူငွေများထဲက ငွေကျပ် သိန်း ၃၀၀ ကို Covid အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကို လှူဒါန်းခဲ့အကြောင်းကို ” SAISAI Birthday Show မွေးနေ့ပွဲကို အခမဲ့ဖျော်ဖြေတဲ့အတွက် ပရိသတ်များနဲ့ မိတ်ဆွေများမှ ဝိုင်းဝန်းလှူဒါန်းရာမှာ အခုအချိန်ထိ အလှူငွေ သိန်း ၈၀၀ ခန့်ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ရရှိတဲ့အလှူငွေများထဲက ငွေကျပ် သိန်း ၃၀၀ ကို Covid အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီကို လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ဒီအလှူငွေတွေဟာ ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအလုပ်နားကာလမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိတဲ့ အခြေခံအိမ်ထောင်စုတွေအတွက် ရိက္ခာဝေငှရေးထဲကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်”ဆိုပြီးရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်” Birthday Show ကနေတဆင့်ရံပုံငွေရှာဖွေတဲ့အစီအစဉ်မှာ ကျနော်နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အနုပညာရှင်များ အတတ်ပညာရှင်များ လုပ်ငန်းရှင်များ နဲ့ ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙏🙏🙏Sai Sai Kham Leng”ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကလည်း စိုင်းစိုင်းရဲ့ အလှူလေးအတွက် သာဓုခေါ်ဆိုပေးခဲ့ပါအုံးနော်။
မငျးရာဇာနဲ့ပတျသကျပွီး ပြံ့နှံ့နတေဲ့ အသံဖိုငျပိုငျရှငျတှကေို သတိပေးလာတဲ့ရုပျရှငျအစညျးအရုံးရဲ့တှဲဖကျ အတှငျး ရေးမှူး ဦးဝငျးမွိုငျ
နိုငျငံကြျော ရုပျရှငျသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ မငျးရာဇာရဲ့ အိမျတှငျး ရေးအရှုပျအရှငျးကတော့ ပရိသတျကွီး သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ပရိသတျတှအေနနေဲ့လညျးမငျးရာဇာရဲ့လုပျရပျကွောငျ့ အ နုပညာသမားတှအေပျေါ အထငျ အမွငျလှဲမှားမှုတှဖွေဈပျေါစသေလို၊အနုပညာရှငျမြားအနနေဲ့လညျးထိခိုကျခဲ့ရတာတှရှေိပါတယျ။မွနျမာနိုငျငံရုပျရှငျအစညျး အရုံးရဲ့တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူးတဈယောကျဖွဈတဲ့သရုပျဆောငျ ဦးဝငျးမွိုငျကတော့မငျးရာဇာရဲ့ကိစ်စနဲ့ ပကျသတျပွီး တရားဥပဒေ ပညာရှငျ ၂ ဦးကို အခုလိုပဲ သတိပေးစကားဆိုလာပါတယျ။
“ရုပျရှငျအစညျးအရုံးဆိုသညျရုပျရှငျလောကသားမြားကမိမိတို့ပညာရပျအလိုကျ အလှာ ၁၀ လှာစုစညျးပွီး အလှာလိုကျတာဝနျခံမြား ရှေးခယျြတငျမွှောကျဖှဲ့စညျးထားသော( အစိုးရမဟုတျသညျ့ ) အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈသညျ။အာဏာရှငျအဖှဲ့အစညျးမဟုတျပေ။ပွဿနာမြား ပျေါပေါကျလြှငျ စညျးရုံးခွငျးနညျး၊ ညှိနှိုငျးဖွရှေငျးခွငျးနညျးမြားကိုသာ အသုံးပွုသညျ။ စုပေါငျးဖွရှေငျးသညျ။ လူတှငျကယျြလုပျသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမဟုတျပေ။”
“ယခု online တှငျပွနျ့နှံ့နသေော တရားဥပဒေ ပညာရှငျ ၂ ဦး၏အသံဖိုငျသညျ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးကိုပရိသတျပွညျသူမြားအထငျအမွငျသေးစမေညျ့ စကားလုံးမြားဖွငျ့ဥပဒပွေငျပမှ စျော ကားပွောဆိုထားသညျ။မိမိတို့မညျသညျ့ဥပဒမြေားကိုကြူးလှနျထားခဲ့သညျကို မိမိတို့အသိဆုံးဖွဈပါလိမျ့မညျ။ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးသညျအာဏာကို အသုံးပွုသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမဟုတျသျောလညျး မိမိအဖှဲ့အစညျးအားထိပါးပုတျခတျ စျောကားမှုကိုမူခေါငျးငုံ့ ငွိမျခံနမေညျ့ အဖှဲ့အစညျးမဟုတျပေ။ထိရောကျသောတုနျ့ပွနျမှုပွုမညျဖွဈသညျ။”
“ဤ post မြိုးကိုသာမနျအားဖွငျ့ ကြှနျုပျတဈယောကျတညျးသဘောဖွငျ့ on line တငျ၍မရပါ။ဦးစီးအမှုဆောငျအစညျး အဝေးဖွငျ့သာအတညျပွု ရေးသား၍ post တငျရပါမညျ။သို့ရာတှငျ covid-19 ကွောငျ့ရုံးပိတျထားသညျ့အခွအေနကွေောငျ့လညျးကောငျး၊မတုနျ့ပွနျဘဲ နှုတျဆိတျနလြှေငျ ရုပျရှငျအစညျးအရုံး၏ ဂုဏျသိက်ခါထိခိုကျ နိုငျသညျကွောငျ့ လညျးကောငျး၊ ရုပျရှငျအစညျးအရုံး ၏ တှဲဖကျအတှငျးရေးမှူး ၂ ဖွဈသညျ့ ကြှနျုပျ အနနှေငျ့ ကြှနျုပျရေးတငျသော post အပျေါ ကိုယျတိုငျ တာဝနျယူမှု တာဝနျခံမှုတို့ ဖွငျ့ အသံဖိုငျပိုငျရှငျ နှဈဦးတို့ သိစရေနျလညျးကောငျးပရိသတျပွညျသူတို့ရုပျရှငျအစညျးအရုံးအပျေါ အထငျအမွငျမလှဲမှားစရေနျလညျး ကောငျး ဤ post ကို ရေးတငျပါသညျ။” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။
မင်းရာဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပျံ့နှံ့နေတဲ့ အသံဖိုင်ပိုင်ရှင်တွေကို သတိပေးလာတဲ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့တွဲဖက် အတွင်း ရေးမှူး ဦးဝင်းမြိုင်
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းရာဇာရဲ့ အိမ်တွင်း ရေးအရှုပ်အရှင်းကတော့ ပရိသတ်ကြီး သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းမင်းရာဇာရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့် အ နုပညာသမားတွေအပေါ် အထင် အမြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေသလို၊အနုပညာရှင်များအနေနဲ့လည်းထိခိုက်ခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်း အရုံးရဲ့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သရုပ်ဆောင် ဦးဝင်းမြိုင်ကတော့မင်းရာဇာရဲ့ကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး တရားဥပဒေ ပညာရှင် ၂ ဦးကို အခုလိုပဲ သတိပေးစကားဆိုလာပါတယ်။
“ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဆိုသည်ရုပ်ရှင်လောကသားများကမိမိတို့ပညာရပ်အလိုက် အလွှာ ၁၀ လွှာစုစည်းပြီး အလွှာလိုက်တာဝန်ခံများ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ဖွဲ့စည်းထားသော( အစိုးရမဟုတ်သည့် ) အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပေ။ပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်လျှင် စည်းရုံးခြင်းနည်း၊ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်းနည်းများကိုသာ အသုံးပြုသည်။ စုပေါင်းဖြေရှင်းသည်။ လူတွင်ကျယ်လုပ်သည့် အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပေ။”
“ယခု online တွင်ပြန့်နှံ့နေသော တရားဥပဒေ ပညာရှင် ၂ ဦး၏အသံဖိုင်သည် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကိုပရိသတ်ပြည်သူများအထင်အမြင်သေးစေမည့် စကားလုံးများဖြင့်ဥပဒေပြင်ပမှ စော် ကားပြောဆိုထားသည်။မိမိတို့မည်သည့်ဥပဒေများကိုကျူးလွန်ထားခဲ့သည်ကို မိမိတို့အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသည်အာဏာကို အသုံးပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်သော်လည်း မိမိအဖွဲ့အစည်းအားထိပါးပုတ်ခတ် စော်ကားမှုကိုမူခေါင်းငုံ့ ငြိမ်ခံနေမည့် အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ပေ။ထိရောက်သောတုန့်ပြန်မှုပြုမည်ဖြစ်သည်။”
“ဤ post မျိုးကိုသာမန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တစ်ယောက်တည်းသဘောဖြင့် on line တင်၍မရပါ။ဦးစီးအမှုဆောင်အစည်း အဝေးဖြင့်သာအတည်ပြု ရေးသား၍ post တင်ရပါမည်။သို့ရာတွင် covid-19 ကြောင့်ရုံးပိတ်ထားသည့်အခြေအနေကြောင့်လည်းကောင်း၊မတုန့်ပြန်ဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေလျှင် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ ဂုဏ်သိက္ခါထိခိုက် နိုင်သည်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ၂ ဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ် အနေနှင့် ကျွန်ုပ်ရေးတင်သော post အပေါ် ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုတို့ ဖြင့် အသံဖိုင်ပိုင်ရှင် နှစ်ဦးတို့ သိစေရန်လည်းကောင်းပရိသတ်ပြည်သူတို့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအပေါ် အထင်အမြင်မလွဲမှားစေရန်လည်း ကောင်း ဤ post ကို ရေးတင်ပါသည်။” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။